Kenya iyo Al-shabaab Guulo ka kala Sheegtay Dagaal ku Dhex-maray Lamu |
Kenya iyo Al-shabaab Guulo ka kala Sheegtay Dagaal ku Dhex-maray Lamu
Warbaahinta dalka Kenya oo soo xiganaysa saraakiil ciidamada Kenya ka tirsan ayaa shaaciyay in ciidamada Kenya ay dileen shan xubnood oo ka tirsan Xarakada Al-shabaab ee Somalia, kaddib dagaal dhexmaray labada dhinac.
Afhayeenka milateriga Kenya, David Obanyo ayaa warbaahinta u sheegay in ay dileen shan dagaalyahan oo Al-shabaabta Soomaaliya, kuwasoo uu xusay in lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Lamu, dhankoodana uu hal askari uga dhigay dagaalka.
Dadka Lamu ku nool ayaa iyaguna sheegay in dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen baabuur ay la socdeen ciidamado ka tirsan kuwa Kenya oo marayay Lamu, balse ma sheegin khasaarihii ka dhashay weerarkaas.
Sidoo kale, afhayeenka milateriga Kenya ayaa sheegay in ciidamadan lagu weeraray Lamu ay ahaayeen kuwo doonayay inay ku biiraan howlgalka ka socda Soomaaliya ee AMISOM.
Waxaa kaloo weerarkan ka hadashay Al-shabaab oo sheegtay inay ku dileen in kabadan 20 askar oo Kenyan ah, ayna gubeen saddax baabuur oo nooca ciidanku adeegsadaan ah.
Al-shabaab ayaa tan iyo sannadkii 2011-kii oo ahayd markii Kenya ay askar ka tirsan ciidamadeeda u soo dirtay gudaha Somalia ay dalkaas ka wadeen weerarro ay ka geysanayaan goobaha miyiga ah iyo magaalooyinka oo ay ku jirto Nairobi.
Gobolka Xeebta Kenya ku yaalla ayay Al-shabaab ka geystay bartmihii 2014-kii oo ahaa sannadkii lasoo dhaafay weerarro ay ku dileen in ka badan 100 qof oo Kenyan ah, kuwaasoo isugu jiray ciidammo iyo shacab.
Si kastaba ha ahaatee, marka laga soo tago wararka is-burinaya ee Kenya iyo Al-shabaab ay kala sheegeen ayaanay haddana jirin xaqiiqo dhab ah oo ku saabsan khasaaraha nafeed ee ka dhashay iska-horimaadkaas.